တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်စက်များ / မြှင့်တင်စက်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | GZSJ
Model GS စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်မြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (Gear Drive) သည်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သောလွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော PLC control system ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်စက်စွမ်းအားပြတ်တောက်သွားသောအခါ၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မှိုများ၏ဘေးကင်းမှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။ မှိုများကိုလွှဲပြောင်းရန်တံခါးပိတ်တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းကအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံသည်။ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ မီတာအထိမြန်သည်။ ထို့အပြင်ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်နှစ်ဆသောအခန်းများပါသောမှိုတစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဖောက်သည်များအတွက်များစွာသက်သာစေသည်။
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း - PP / PE / PA / PVC / EVA
ဗို့အား: 380V --- 440V သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
အသုံးပြုမှု: Wide အသုံးပြုမှု
အမျိုးအစား: ပိုက် Extrusion ပြုလုပ်ခြင်းစက်
အင်ဗာတာ: ABB အင်ဗာတာ
အရောင်: အဖြူ, အနက်ရောင်, အပြာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
output： 40-60 ကီလိုဂရမ် / H ကို
ပါဝါ: 25KW - 50 KW
အာမခံ: တစ်နှစ်, 12 လ
After- အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု - အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
ထုတ်ယူခြင်းအမျိုးအစား: Exturding စက်
အမြန်နှုန်းမြန် PP PE PA PVC Corrugated Conduit Pipe Extruder စက်၏ထူးခြားချက်များနှင့်အားသာချက်များ
၁။ ဝက်အူနှင့်သေပုံ၏အထူးတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့်မှိုအတုံးများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသောကြောင့် ၀ င်ရလွယ်သော ၀ င်ရိုးနှင့်ဘားရိုးပြtheနာအပြင်ပလတ်စတစ်အစေးဖြင့်ဖွဲ့စည်းရသည့်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
၂။ Corrugator သည်ပိတ်ထားသောရေအေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပိတ်ထားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိတ်ဆို့မှုနှင့်အထူးရထားလမ်းဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ကွက်အားလုံးမှန်ကန်စွာကိုက်ညီစေပြီးပုံမှန်လည်ပတ်စေသည်။ ပိုက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းကိုပင်သင်မမြင်နိုင်ပါ။ ရေကိုအအေးခံသည့်နေရာတွင်စက်ဘီးစီးသည်။ ၎င်းသည်အအေးနှုန်းကိုမြန်စေပြီးပိုက်၏ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
ဤအတောအတွင်း Corrugator သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံတည်ဆောက်မှုတစ်ခုတည်းကိုသုံးနိုင်သည်။ Corrugator ၏ရှည်လျားသောဖွဲ့စည်းမှုသည်ရှည်လေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသော cusotmers များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောပုံစံအရှည်မြှင့်စက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၏အားသာချက်များ High Speed ​​PP PE PA Corrugated Conduit ပိုက် Extruder စက်၏အားသာချက်များ
၁။ Bearing ကို ဖြတ်၍ ပုံသွင်းသောမှိုများ! ထို့ကြောင့်စက်များအလွန်လျှင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၁၅-၂၅M / MIN သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ပုံမှန်ပုံစံမှိုများကိုတံဆိပ်များဖြင့်ပိတ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder တပ်ဆင်ထားသည်, PVC ၏အဓိကစက်သည်နှစ်ဆ conic screw extruder ကိုအသုံးပြုသည်။
၂. အမြန်နှုန်းမြန်သောသုတ်ဆေးဖွဲ့စည်းသောစက် - တံခါးပိတ်တည်ဆောက်ပုံ၊ ခြုံငုံပိတ်ထားသောအခြေစိုက်စခန်းရှိ module ချိတ်ဆက်မှုသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်စေသည်။
၃။ ပုံသေတပ်ဆင်ခြင်း - ပုံသဏ္modာန်၏မာကျောမှုနှင့်တိကျမှုတို့ကိုသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်သည့်အပိုင်းအစများ - ၎င်းကိုခိုင်မာသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး CNC အပြီးသတ်ပစ္စည်းများကိုတိကျစွာအသုံးပြုသည်။ ဤ module များသည်ပြောင်းရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါသည်
4. Coiler: torque မော်တာနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအနေအထားသို့မဟုတ်နှစ်ဆအနေအထား။
၅။ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ - ABB အင်ဗာတာ၊ Schneider အဆက်အသွယ်၊ Omron အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစသည်တို့